China PUR inopisa inopisa inonamira laminating muchina TH-101A Kugadzira uye Fekitori | Kangpa
Muchina womuenzaniso: X-TH101A
Kukura kwemuchina: kureba * upamhi a * kukwirira / 3980mm * 4800mm * 2080mm
Upamhi machinable zvinhu: 1800mm
Kubudirira: 0 ~ 40m / min
Magetsi: 380V / AC
Heating nzira: Electric kudziyisa
Kufananidza zvishongedzo: 200L sol muchina
Gluing nzira: glue poindi yekuchinjisa yeglue roller
Simba rekutyaira: AC inoshanduka frequency frequency isina danho rekumhanya
Kudzora system: PLC interface
Kurema kwemuchina: 5600kg
Mechanical ruvara: off-chena, Chinese tsvuku
Zvipfeko, machira epamba, shangu, zvigadzirwa zvevana, zvigadzirwa zvekunze, mitambo yekudzivirira, nezvimwe.
5.Nekupisa kupisa oiri kupisa kutenderera sisitimu, zviri nyore kudzora tembiricha kumuka uye kudonha uye kugadzikana kweglue.
6. Laminating zvishandiso uye zvakapedza zvigadzirwa zvinogona kutora yepakati coiling kana pamusoro pekusarudza nzira sekudikanwa.
7. Iyo nzira yekunamira yakakamurwa kuita sarudzo mbiri: kugovera uye kuzara kuzere.
Kuchengetedza kwePUR inopisa inopisa melt kunamatira.
Vashandisi vanogona kungoshandisa chishandiso ichi mushure mekunge vanyatsoziva mashandiro emuchina uye nemisimboti yekushanda. Iyi midziyo inofanirwa kushanda nemunhu akazvipira, uye vasiri-vanoshanda havagone kuvhura kana kufamba zvisina mutsindo.
Usati wagadzira, tarisa kana zvishandiso zvemagetsi zvakaita setambo, mabhureki edunhu, macontactors, uye mota zvinosangana nezvinodiwa.
Usati wagadzira, tarisa kana matatu-chikamu magetsi magetsi ari akaenzana. Izvo zvinorambidzwa zvachose kutanga iyo michina isina chikamu.
Munguva yekugadzira, tarisa kana yega rotary mubatanidzwa wakachengeteka, kana iyo pombi isina kuvhurwa, kana paine chero kukuvara, kana oiri leakage, uye bvisa iyo munguva.
Muchina unopisa wemafuta unofanirwa kuvhenekerwa usati wagadzirwa, uye chigadzirwa chingaitwe chete mushure mekunge tembiricha yakwira kusvika patembiricha inodiwa nemaitiro acho. Usati wagadzira, tarisa kana kumanikidzwa kwega kwega barometer kwakajairika, kana paine chero kuvhuvhuta munzira yegasi, uye kuigadzirisa munguva.
Usati wagadzira, tarisa kusimbisa kwechero kubatanidza kuti uone kana paine kusununguka kana kudonha, uye kuigadzirisa munguva.
Pamberi pekugadzirwa kwakawanda kwemidziyo, shoma bvunzo inofanira kutanga yaitwa, uye kugadzirwa kwemazhinji kunogona kuitwa chete mushure mekubudirira.
Usati wagadzira, tarisa mamiriro ekugadzirwa kwenzvimbo dzakasiyana dzemagetsi, ma reducer, anotakura makwenzi, sikuruu dzinotungamira, nezvimwewo, uye zadza hydraulic mafuta uye mafuta ekuzora nenzira chaiyo uye yakakodzera.
Mushure mekumiswa kwemuchina, tangi yeglue, zvishongedzo zvekuchinjisa, uye roller anilox inofanirwa kucheneswa munguva yekubvisa zvakasara zveglue uye tsvina kubva kumativi ese emuchina kuti ushandiswe zvinotevera
Izvo zvakanyatsorambidzwa kubata zvinokanganisa zvinwiwa nemabhaidha emabhora, uye gara uchiita shuwa kuti pamusoro pega yega dhiraivha roller yakachena uye haina chekunze nyaya.
Izvo zvinorambidzwa zvachose kuunganidza marara akakomberedza muchina unopisa wemafuta, uye chengetedza iyo inopisa mafuta muchina nenzvimbo dzayo dzakachena uye dzisina zvinhu zvekunze nguva dzese. Kana muchina wemafuta unopisa uchinge uchishanda, zvinorambidzwa zvachose kubata pombi yemafuta neruoko.
Pashure: Blister Kurongedza Hydraulic Press
Yakanaka Laminating Machine
Kupisa Laminating Machine
Maindasitiri Laminating Machine
Industrial Laminating Machine Mutengo
Laminating Machine Yekushandisa Kumba
Laminating Machine Mapepa
Laminating Machine Inotengesa
Pur Hot Melt Inonamatira Laminating Machine
Otomatiki Inopisa Melt Glue Laminating Machine, Kupisa Melt Glue Anonyorera, Pur Hot Melt Inonamatira Laminating Machine, Yakapisa Melt Glue Laminating Machine YeJasi, Pur Hot Melt guruu Nonwoven Laminating Machine, Kupisa Melt Glue Laminating Machine Ine Ce Chitupa,